Iindaba -Iiseti ezi-6 zeempompo ezinendawo yokuLunga zifunyenwe kakuhle yi-EVOMEC
Ukuhamba kweTongke kubonelelwa ngeeseti ezi-6 zeeseti zempompo yenqaku le-EVOMEC ngo-2019. Zimbini iivili ezinokushenxiswa zohlobo lwenjini yedizili. Imodeli yempompo: SPDW150, amandla: 360m3 / h, iNtloko: i-28 m, kunye neendawo zombhobho kunye nenqaku lequla. I-EVOMEC iyinkokeli kubunjineli obuninzi, iinkonzo zokwakha kunye neoyile kunye negesi ngobuninzi obungenakuthelekiswa nanto bokulinganisa ubungakanani bezakhono zethu kunye nobungakanani beenkonzo zethu nakweyiphi na iprojekthi nokuba kungasemhlabeni okanye elwandle. Baneqela labo leenjineli kwaye banobuchwephesha kakhulu kwaye sonwabile kakhulu ukusebenza nabo.
Ngokubhekiselele kwi-pandemi ebalulekileyo yehlabathi, asinakho ukuthumela iinjineli kwinkonzo yasekhaya. Emva kwemizamo yamacala omabini kunye nonxibelelwano lwe-Intanethi Siyisombulule ingxaki yokuba ubushushu bempompo yokutsala buphezulu kakhulu phantsi kweemeko zokusebenza ezinobushushu obuphezulu.
Siyavuya ukuba ukusebenza kwempompo kusebenza kakuhle kwaye sayifumana i-imeyile yokuvuya:
Ndikwazile ukuseta zonke iiyunithi ezintandathu kwaye ndazivavanye ezi-3 zazo ezisebenza kakuhle kakhulu !! (iividiyo kunye neefoto eziza kungekudala).
Ndiyabulela kakhulu omnye nomnye kuni ohambe iimayile ezingaphezulu ukufezekisa oku. Enkosi kakhulu!
Njengoko kusaziwa ngezixhobo, amanqaku kakuhle (amacebo okucoca ulwelo) apho ayile khona ngokungekho mthethweni, ndithenge iifilitha ezintsha ukuzakha ngokutsha (imifanekiso eqhotyoshelweyo) kwezinye ukusebenzisa iiyunithi.
Ndizakufuna ukuthenga ezinye izinto ezinje ngenjini yokufaka inkunkuma / iimpompo zepetroli, iisenzi, izixhobo zokuphembelela njlnjl. ngokufanelekileyo. "
Enkosi ngokunyaniseka kwabathengi kunye nokuthembela, siya kuqhubeka nokuzama ukubonelela abathengi ngeemveliso ezingcono kunye neenkonzo.